Service - Xinglu Chemical Teknolojia Co., Ltd.
tsy fahita firy eto An-tany
Tsy fahita firy Earth Oxide
Tsy fahita firy Earth Nitrate
Tsy fahita firy Earth Metal
Tsy fahita firy Earth Fluoride
Tsy fahita firy Earth Klôro
● Customer sy voafintina / OEM
Amin'ny fahaizany sy ny famokarana matanjaka taona ny famokarana traikefa, isika dia afaka hahazo valin haingana amin'ny fanovana R & D ho mpanamory sehatra famokarana avy eo goavana famokarana. Afaka maka isan-karazany ny loharanon-karena ho zavatra mba hanefa fanao mpanamboatra sy OEM tolotra ho an'ny fiteny maro samy hafa tsara simika.
● Mitarika rafitra fankatoavana mialoha, ohatra, na inona na inona ny lavitra avy amin'ny tambajotra, ny hanaiky sy manamarina ny famokarana sy ny fanaraha-maso ny kalitao trano.
● Ny fikirakirana ny misy fitarainana avy amin'ny mpanjifa amin'ny expediency mba hahazoana antoka nanahirana kely indrindra.
● Manome vidiny upgraded tsy tapaka ny lisitry ho an'ny tena vokatra.
● Quick relaying ny fanazavana momba ny tsy mahazatra na tsy ampoizina ny fironana ho amin'ny tsena ny mpanjifa.
Fast mba fikarakarana sady nandroso birao rafitra, matetika niafara tamin'ny transmittals ny filaminana fandraisana ho mpikambana, ary ny fandefasana faktiora proforma antsipiriany ao anatin'ny fotoana fohy.
● Full fanohanana eo amin'ny fahazoan-dalana amin'ny alalan'ny fifadian-kanina expediting transmittals ny dika mitovy ny antontan-taratasy marina takian'ny mailaka na telex. Anisan'izany ny Express fisaorana
● Manampy ny mpanjifa eo amin'ny fihaonana ny vinavina, indrindra fa amin'ny alalan'ny fandaharam-potoana, raha marina fiterahana.
Omeo lanjany-nanampy asa fanompoana sy tsy manam-paharoa costumer traikefa ny mpanjifa, mitsenà ilay zavatra ilaina isan'andro, ary manome vahaolana ho an'ny zava-manahirana.
● Tsara fifanarahana amin'ny hevitra sy ara-potoana ny zavatra ilaina sy ny soso-kevitra ny costumers.
● Handova vokatra matihanina fampandrosoana ny fahaizany, ny tsara sy ny fahaiza-manao eny ifotony ekipa mavitrika ara-barotra.
● Ny mivarotra vokatra tsara eo amin'ny tsena eoropeanina, ary nahazo laza tsara sy avo malaza.
● Manomeza maimaim-poana santionany.
©Copyright - 2010-2019 :Xinglu Chemical All Rights Reserved. Hot Products - Sitemap - DIEM Mobile
Silika, Moo3, Al2o3, Zro2,
No 1588, Lianhang Road, Minhang Dist, Shanghai, Sina